समावेशी समानुपातिक माथि देउवा ,प्रचण्डको प्रहार !
कांग्रेस पार्टीले धेरै सकस पश्चात बल्ल तल्ल मन्त्रीमंडलमा पठाउने मन्त्रीहरुको नाम टुंग्याएको छ अन्ततः अब चाही प्रचण्ड मन्त्रीमंडलले पूर्णता पाउने निश्चित प्रायः भयो |प्रचण्ड मन्त्रीमंडलको हुने स्वरुपले समावेशी समानुपातिक शब्द माथि क्रुर प्रहार गरेको छ |-अमरदीप मोक्तान
माओवादी, काँग्रेस, राप्रपा. नेकपा संयुक्त द्वारा प्रचण्ड मंत्रिमंडला मा पठाइएका मन्त्रिमा नेकाप माओबादी केन्द्रको आठ जना मन्त्रीमा १) कृष्णबहादुर महरा, २) राम कार्की, =(क्षेत्रि ) ३) जनार्दन शर्मा , ४) हितराज पाण्डे, ५) धनीराम पौडेल,= (बाहुन) ६) अजयशङ्कर नायक,= (मधेशी ) ७) दलजित श्रीपाली =(दलित) ८) गौरीशंकर चौधरी (आदिवाशी) मन्त्रि भएका छन् । नेपाली कांग्रेश तर्फ बाट १५ जना मन्त्रीमा १) बिमलेन्द्र निधि र २) सीतादेवी यादव = (मधेशी), ३) रमेश लेखक, , ४) नविन्द्रराज जोशी , ५) शंकर भण्डारी = (बाहुन) ६ )अर्जुननरसिंह केसी , ७ ) प्रकाश शरण महत ८)बालकृष्ण खाँड ९) जीवनबहादुर शाही, १०)गगन थापा, ११) केशवकुमार बुढाथोकी, १२) हृदयराम थानी = (क्षेत्रि ठकुरी) १३)दीपक गिरि=,( गिरि ) १४) सुर्यमान गुरुङ १५ )रोमीगौचन थकाली = आदिवाशी (आदिवाशी) मन्त्रि भएका छन् ।राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुई जना मन्त्रीमा १) बिक्रम पाण्डे = ( बाहुन) २) दिपक बोहरा =(क्षेत्रि) मन्त्रि भएका छन् ।नेकपा संयुक्त को एक मन्त्रीमा १) जयदेव जोशी =(बाहुन) |
साना दलबाट चयन हुदा समावेशी समानुपातिक प्रति ध्यान दिने हुन् वा होइनन त्योहेर्न बाकि छ तर अहिले सम्म भई सकेका तथा हुने मन्त्रि को चयन ले प्रचण्ड मन्त्रीमंडल ले समावेशी समानुपातिक शब्द लाई तिरस्कार गरेको तथा संबिधान को मूल मर्म माथि प्रहार गरेको स्पस्ट रुप मा देखिन्छ |संबिधान निर्माण हुनु राष्ट्रका लागि ठुलो उपलब्धि भएता पनि संबिधानमा लिपिबद्ध भएका शब्द हरुको अक्षरस पालना भएन भने संबिधान कागज को खोस्टो मा परिणत हुन् सक्ने शंका बनि रहन्छ | नेपाली ले संबिधान त् प्राप्त गरे तर संबिधान कार्यवनयन गर्ने हरु को नियत स्वक्छ र पूर्वाग्रह रहित भएन भने संबिधान को सफलता मा प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हुन् सक्छ |
समावेशी समानुपातिक शब्दको खाली स्थान लाई पूर्ति गर्न चतुर प्रचण्ड तथा देउवा ले राज्य मन्त्रि तथा साना दल मा आदिवाशी दलित मधेशी समावेश गरेर मुर्ख बनाउने पक्का छ |वंश रहे अंश पाइन्छ तर दुर्भाग्य नेपाल को शासन सत्ता मा अहिले सम्म जो पनि सत्तासिन भए उनीहरु ले अंश को त कुरा न गरौ अंश, हक अधिकारको कुरा गर्नेको वंश नै समाप्त पार्ने षड्यन्त्र रचिन्छ | नेपालमा न त् राजाले नै राज्यको अभिभावक बन्ने प्रयत्न गरे न त् प्रधानमन्त्री , मन्त्रि ले राष्ट्रको प्रधानमन्त्री हुन् भन्ने आभास गराए तथा बन्ने प्रयत्न पनि गरेनन | आफ्नो परिवार आफ्नो समुह घेरा भन्दा बाहिर कहिले पनि निस्कने प्रयाश गरेनन फलस्वरूप नेपाल मा हमेशा राजनेता रिक्तता रही रह्यो |
महात्मा गान्धीले राष्ट्र को विषय मा परिवार लाई कहिले पनि हस्क्षेप गर्न दिएनन् महात्मा गान्धी को दृस्टी भारत का सम्पूर्ण जनता समान थिए वहा ले जात पात धर्म को आधार मा कहिले पनि भेदभाव गरेनन त्यस कारण भारतीय जनता ले मोहनदास करमचन्द गान्धी लाई "महात्मा" तथा राष्ट्रपिता जस्ता आदरणीय शब्द ले विभूषित गरे | भारतमा महात्मा गान्धीका कति सन्तान र उनीहरुका नाम के हुन् भनि जनमत संग्रह गरिए बहुसंख्यक भारतीय जनता लाई थाहा छैन किन भने राष्ट्र र परिवार मा के दुरी हुनु पर्छ त्यो महात्मा गान्धी लाई रामरी थाहा थियो, महात्मा गान्धी ले परिवार वाद लाई राष्ट्र संग कहिले जोड्नु भएन सदैव टाडा राख्नु भयो |नेपालका नेताहरु राजनेता किन बनेनन्? जनताले नेतालाई किन घृणा को दृस्टीले हेर्छन , नेता जनताको नजरमा किन आदरणीय बन्न सकेनन सरल उत्तर हो हाल सम्म सतासिन भएका नेताहरु आफ्ना परिवार नाता सम्बन्ध को घेरा भन्दा कहिले पनि बाहिर निस्कनु न सक्नु नै प्रमुख कारण हो |
राजा ज्ञानेन्द्र राष्ट्र को अभिभावक भन्दा पनि पारसको पिता बन्न खोज्दा राजगद्दी बाट हमेशा का लागि सत्ताच्य्त हुन् पर्यो ,स्वर्गीय गिरिजा प्रशाद कोइराला पुत्री मोह तथा आफन्तजन को मोह बाट बाहिर निस्कन सकेनन आफुलाई मधेश का मसिहा हुन् भनि गर्व बोध गर्ने राजेन्द्र भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुत्र मोह मा लिप्त भएको उदाहरण नेपाली जनता सामु छ |
विगतमा पनि नेपाल मा संबिधान निर्माण न भएका होइनन तर संबिधान किन सफल हुन् सकेन किन असफल भयो ,संबिधान को मूल मर्म तथा भवन संग खेलवाड गरेको फलस्वरूप विगत का संबिधान असफल भएका हुन् |नेपाल मा जति पनि संबिधान निर्मण भयो त्यो केहि सिमित वर्ग ले उल्लङ्घन तथा आफ्नो अनुकुल को ब्याख्या गर्न का लागि मात्र निर्माण भएको थियो तथा थिचिएका पिल्सिएका उत्पीडित समुदाय लाई संबिधान को धारा उपधारा तथा कानुन को दण्ड देख्येर त्रसित बनाउन बाहेक केहि भएन |
ऐतिहाशिक संबिधान सभा ले निर्माण गरेको संबिधान विगत को संबिधान जस्तै घोर उल्लङ्घन तथा आफ्नो अनुकुल ब्याख्या तर्फ उन्मुख भई रहेको उदाहरण वर्तमान मन्त्रीमंडल गठन मा समावेशी समानुपातिक को उपेक्षा ले विगत को जस्तै असफल हुने तर उन्मुख भई रहेको प्रतित हुन्छ |राज्य का सबै निकाय मा समावेशी समानुपातिक हुनु पर्छ भन्ने शब्द त् संबिधान मा लिपिबद्ध भयो तर खोई त् नेपाल का ठुला भनाउदा हरु ले नियम पालना गरेको ?अग्रगामी संबिधान को निर्माण भयो भनि गर्व बोध मात्र गर्ने कि संबिधान लाई सफल बनाउन संबिधान मा लेखिए का शब्द लाई अक्क्षरस पालना गर्ने वातावरण को निर्माण विषय मा सोच्ने कि न सोच्ने ? हास्यास्पद के छ भने काँग्रेस बाट नुवाकोट बाट २ मन्त्रि अर्जुन नर्सिङ्ग केसी तथा प्रकाश शरण मन्त्रि बनाइएका छन् यदि नुवाकोट जिल्ला बाट बनाउनु नै थियो भने नुवाकोट का बहादुर सिङ्ग तामांग लाई मन्त्रि बनाएको भए के पहाड खस्ने थियो ?काँग्रेस पार्टी ले प्रदेश ३ मा यत्रो जिल्ला हुदा हुदै नुवाकोट बाट दुइ जना लाइ मन्त्रि बनाएर प्रदेश ३ को प्रतिनिधित्व भएको देखाउनु राजनीतिक बेइमानी बाहेक केहि होइन |
यदि विगत को असफल परम्परा लाइ निरन्तरता दिने तथा काखी च्याप्ने हो भने ऐतिहाशिक संबिधानसभा निर्मित संबिधान भनिएता पनि त्यो संबिधान असफल हुने निश्चित छ |संबिधान को पालना राष्ट्र अनुकुल हुनु पर्दछ न कि आफ्नो परिवार आफ्नो समुह इस्ट मित्र अनुकुल हुनु पर्छ भनि मनन गर्न जरुरि छ |राष्ट्रिय स्वाभिमान को कुरा भोको पेट ले मात्र हुदैन राष्ट्रिय स्वाभिमान तब मात्रै मजबूत तथा सफल हुन्छ जब राष्ट्र क प्रत्येक नागरिक ले अपनत्व बोध गरेको हुन्छ |राष्ट्रिय स्वाभिमान कसैको जमिन्दारी जगिर्दारी न भई सम्पूर्ण नेपाली जनता को समान हिस्सेदारी ले मात्र सम्भव हुन् सक्छ |नेपाली जनता को विडम्बना के छ भने माओवादी दस्तावेज मा मा काँग्रेस प्रधान शत्रु उल्लेखित भएता पनि ,माओवादी लाई जनयुद्ध मा जबर्जस्ति धकेल्ने कांग्रेस, माओवादी समावेशी समानुपातिक शब्द को घोर उपहाश गर्दै एकै मंचमा विराजमान भएर नेपाली जनता लाइ मुर्ख बनाइ रहेका छन् |विगत मा जे भयो भयो अब पनि ठुला भनाउदा पार्टीहरुले आफ्नो आचरण सुधार गरेनन भने नेपाल एउटा ठुलो द्वन्दमा धकेलिने निस्चित छ |
अमरदीप मोक्तान ,डाडा खर्क ,दोलखा
Last Updated on Friday, 26 August 2016 10:09
आदिबासि जनजातिका सम्बोधन गरिनुपर्ने अन्य समस्याहरु
आज (आदिबासी जनजाति) का राजनैतीक मात्रै होइनन अन्य मुद्दालाई पनि सम्बोधन गरिनुपर्ने देखिन्छ । आज समुदायमा सामाजिक, सैक्षिक, आर्थिक, साँस्कृतिक र अन्य धेरै पक्षमा समस्याहरु बिद्धमान छन । यि समस्याहरु सर्बप्रथम त आफ्नै कमी कमजोरिका उपलब्धी हुन । राज्यको बिभेदित नितिको प्रतक्ष प्रभाव त छँदै छ । भेदभावपूर्ण नितिलाई औंला ठडाइ-ठडाइ उज्गार गरिन्छ तर आफ्नै कमी-कमजोरिलाई औंल्याईएको भने हुँदैन । तिनका समाधानका उपाय न त कसैले बहस गरेको सुनिन्छ न त निराकरणका कुनै कार्ययोजना बनाइएको छ ।
आजका यि अन्य मुद्दालाई कसैले न उठाएको भने होइन । तिनलाई बोकेर हिंडने केही अभियन्ता जन्मेकै हुन । तर जनसहभागीताको अभावले गर्दा तिनिहरु ओझेल परेका हुन । यसको एक कारण राजनीति गर्नेलाई नेता मान्ने सामाजिक अभियन्तालाई नेता नमान्ने संस्कारले गर्दा हो । सामाजिक समस्याप्रती बोल्ने ब्यक्तिहरुलाई नेता भनिन्न र समाजमा तिनलाई उच्च सम्मान दिइन्न । राजनीति गर्ने नेतालाई मात्रै पुज्ने संस्कारले आजका अन्य इस्यु ओझेलमा परेका हुन । मिडियाले राजनैतिक भाषाण छांट्नेलाई मात्रै फ्रन्ट लाइनमा हेडलाइन बनाइदिन्छ । ति नेतालाई माला र खादा ओडाइन्छ । कुनै भेलामा सम्मानका साथ अगाडिको कुर्चिमा स्थान दिइन्छ । तिनै नेताको फेरी ढाड पछाडि कुरो काटिन्छ ।
आज (आदिबासी जनजाती) राजनीति बाहेक अन्य आयामतिर उन्मुख नहुनाका केही कारणहरु छन । एउटा त हो, मिडियाले राजनैतिक भाषण छाँटने ब्याक्तिलाई माथि उठाइदिनु अनी समाजमा उसलाई एक हिरोको रुपमा हेरिनु । तर अन्य बिषयका ज्ञाता र अभियन्ताहरुलाई सामान्य ब्यक्तिको रुपमा हेरिन्छ । एउटा पार्टिको झोला बोकेर राजनीति गर्ने ब्यक्ती भोली मन्त्री होला र गाउँमा बाटोघाटो ल्याइदेला भन्ने भ्रमले हो त्यसो गरिएको । राजनैतिक समाधानको रोड म्याप कोरियो । अब तलका मुद्दालाई सम्बोधन गरिने पनि रोड म्याप निर्माण गर्न जरुरी छ ।
नेवार समुदाय बाहेक नेपालमा अन्य आदिवासी जनजाती सामाजिक बिकासको गतिमा पछी परेका छन । ब्याक्तिबादी तथा कुटुम्बबादी सोंच हावी हुनु यसको प्रमुख कारण हुन । ब्यक्ती-ब्याक्ती, समुदाय-समुदाय, क्षेत्र-क्षेत्र, वा संगठन-संगठन बिच सहकार्य गर्नाको धेरै फाईदा छन । नबिन बस्तुको निर्माण, छिटो र छरितो कार्यसम्पादन, थोरै लगानी धेरै लाभ हुनसक्छन । आज समुदायभित्र यसरी कोलाबरेसनमा परीयोजना चलाएर फाईदा लिएको बिरलै पाईन्छ । संगठन निर्माण, र ब्याबस्थापन कसर गर्ने भन्ने कुरामा पनि चुकेको देखिन्छ । बरु अरुको सङ्गठनमा इमान्दार र अनुशासित बनेर काम गर्ने बानी हुन्छ । यस्ता गुण भएका समाजका ब्यक्तीहरु कहिल्लै मालिक बन्न सक्दैनन, सधैं मजदुर रहिरहेर जिउनुपर्ने बाद्ययता आउँछ । यो समस्या आज समुदायमा हिंज पनि टडकारो थियो, अैले पनि छ, र भोली पनि रहिरहनेछ । अब प्रश्न उठ्छ आज समुदायमा यस्ता समस्याको हल कसले गरिदिने ?
आज शिक्षामा पिछाडी परेको घाम जस्तै छर्लङै छ- राज्यको नितिले हो या बंसानुगत बिशेषताले । स्रोत र साधन सिमित रहेको राज्यलाई सधैं दोस देखाउनु भन्दा अगुवाहरुले आ-आफ्नो समाजमा शैक्षिक क्रांति ल्यान सक्छन । नेवार समुदायको आफ्नै भाषा छ तर पनि उनिहरुमा राष्ट्रिय स्तरका बौद्दिक ब्यक्तित्व पनि छन । त्यसैले सबैले नेवार समाजको मोडल अङ्गिकार गरेमा शैक्षिक बिकास सम्भव छ ।
आम-चेतनसिल बन्न शिक्षा अनिबार्य हुनैपर्छ भन्ने छैन । सामाजिक पृष्ठभूमी बलियो छ भने प्राय सबै बिषयमा न्युनतम सचेतना राख्न सकिन्छ । सामान्य जागरुकताको कमी हुँदैन । तर दुर्भाग्य भन्न पर्छ आज मा सामान्य जागरुकताको स्तर अन्य जात भन्दा तल छ । यसैको कारण, उदाहरणको लागि, जोखिम आङ्कलन गर्ने छमता छैन । हालैको महाभुकम्प पीडितहरुमाझ सर्बेछण गर्ने हो भने अधिकतम पीडित जाती आज पृष्ठभूमी भएकाहरु छन । कस्तो भुभागमा बस्ती बस्दा प्राकृतिक प्रकोपबाट टाढा रहन सकिन्छ भन्ने जागरुकताको कमी पाईन्छ । बाजे बाराजु जुन भुमिमा बस्दै आए त्यँही रमाइरहने स्वाभावका भएर हो । त्यो ठाउँ पहिला आबाद योग्य थियो होला तर बातावरणिय परिवर्तनले त्यो अवस्था अैले नहुन सक्छ ।
यि गहन बिषयलाई कुन नेताले सम्बोधन गरेका छन त ? यि बिषयमा जागरुकता देखाउने सामाजिक अभियन्ता को खाँचो छ । त्यस्ता ब्यक्तिहरु उत्पादन गरी बस्ती बस्तीमा पठाउन जरुरी छ । भोट हाल्नुस हामी सिंहदरबारमा पुग्नपर्छ भन्नेको भने कमि छैन ।
आर्थिक उन्नतिलाई आज का संगठनले प्राथमिकताको सुचिमा पिछाडी राखेका छन । संगठनका बिधानमा पहिलो प्राथमिकता भाषा संस्कृतिको सम्रक्षण र सम्बर्धनलाई दिईएको हुन्छ । अब यसलाई परिवर्तन गरी पहिलो उद्देस्य समाजको आर्थिक उन्नती भनेर लेखिन जरुरी छ । आधुनिक युगको अर्थब्यबस्था र यसको महत्व बारे अधिकतम जनसङ्ख्या अनभिज्ञ छन । पैसा धेरै छ भन्दैमा त्यो ब्यक्ती धनी बन्दैन । थोरै पैसाले धेरै बनाउन सक्ने सिप हुनपर्छ । थोरै पुँजिले धेरै उत्पादन गर्न सक्ने कला हुनपर्छ । चुस्त तरिकाले आर्थिक कारोबार चलाऊन सक्नुपर्छ । बलियो अर्थतन्त्र समाजको मियो भने पनि हुन्छ ।
मावोबाद र मर्क्सबादका भाषाण दिने मात्रै होइन, 'माग र आपुर्ती, क्रेता र बिक्रेता बिचका सम्बन्ध जस्ता अर्थशास्त्रका सिद्दान्तका ज्ञ्याता पनि जन्माउनु पर्ने हुन्छ । सिँह दरबारको कुर्ची मात्रै होइन राष्ट्र बैङ्कको कुर्ची पनि ताक्न जनसक्ती तयार पार्नपर्छ । बस्ति-बस्तीमा मितब्यायिताको जनजागरण कार्यक्रम ल्याउन पर्छ । अगुवा संस्थाहरु आज समुदायमा पुगेर शनिबारे बिहीवारे बजारको स्थापना गरी घरमा उब्जेको साग-सब्जी देखी पालेको भैंसी सुङुर; पारेको जाँडा, तोङ्बा र रक्सी बिक्री गर्न सक्ने माइक्रो इकोनोमीको ब्याबस्था गराइदिनुपर्छ ।
आज समुदाय सांस्कृतिमा धनी मानिन्छ । लिखित पद्दति बिनाको र भनाइको आधारमा एक पुश्ताबाट अर्को पुष्तामा हस्तान्तरण भइरहेकोले कयौं जातिका सँस्क्रिती लोपान्मुख अवस्थामा छन । तिनको सम्बर्धन र सम्रक्षणको खाँचो छ कला कृतिको रुपमा, मुर्तिको रुपमा, संघ्रालयको रुपमा; साहित्य, चलचित्र, अडियो भिडियो सि डि को रुपमा । यिनैलाई आर्थिक स्रोतको रुपमा परीणत गर्न पनि सकिन्छ । यसका बचावका लागि केही संगठनहरु खोलिएका छन ता पनि राजनैतिक मुद्दालाई जस्तो प्राथमिकताकासाथ अगाडि बढाइएको पाइँदैन ।
प्रबिधि तथा स्रोत-साधनको प्रयोग-औजार खेलाउन जान्नाले काम छिटो हुन्छ । शरीरलाई आराम हुन्छ । समयको बचत हुन्छ । उब्रेको समयले अर्को काम फत्य गर्न सकिन्छ । जसले छोटो समयमा धेरै काम सिध्याउन सक्छ त्यही समाज बिकास क्रममा अगाडि लम्कने हो । सही औजारको प्रयोगले गरिएको काम राम्रो बलियो पनि हुन्छ । आजमा कस्तो औजार कतिबेला प्रयोग गर्नपर्छ भन्ने कुराको ठीक जानकारी छैन । अनी आफ्नो वरीपरी उपलब्ध स्रोत र साधनलाई समयानुकुल ठीक ठाउँमा प्रयोग भएको हुँदैन । आफैले भारी बोक्ने तर गधा खच्चड प्रयोग नगर्ने बानी हुन्छ । हो, प्रक्रितीको समिप्यले पर्यावरण बचावमा आजको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तर गरिवी र तालिमप्राप्त ज्ञानको अभावले पर्याबरणलाई सखाप पनि परेका हुन्छन । बन्यजन्तु, जडिबुटी र बनस्पतिलाई जोगाउँदै कसरी आफ्नो जिविको पार्जन गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा तिनलाई कसले दिने ? बैज्ञानीक ढंगले कृषि गरेर बाँच्न कसले सिकाउने ? यि बिषयमा ज्ञान दिलाउनु एक जिम्मेवार संस्थाको दायित्व हुन्छ ।
जातिय भाषा बचाउलाइ राजनैतिक भाषणमा ठुलै स्वरले फुकेपनी व्यबहारमा केही भएको छैन । अङ्रेजी हिन्दी भाषाको चपेटामा र अन्य तत्वको प्रभावमा मात्र्यु भाषाहरु जनजिब्रोबाट हराइरहेका छन । सरकारलाई प्रेसर दिएर पाठ्यक्रम निकाल्न सकिन्छ । भाषिक विद्वान जन्माउन सकिन्छ । दुइचार जनाले ब्याक्तिगत प्रयास गरेता पनि संस्थागतरुपमा भाषा सम्रक्षण कार्य अगाडि बढेको छैन । एक विद्यार्थीलाई ने. बि. संघको नेता हुन प्रोत्साहन गरिन्छ तर,उदाहरणकोलागी,राइ/लिम्बु भाषाको शिक्षक हुन गरिदैन ।
कृषि देसको मुल पेशा हो । एक पाथी कोदो छरेर पाँच पाथी उमार्न अधिकांसले जानेका हुन्छन । सबैका घरमा कुख्रा, बाख्रा, भैंसी जस्ता जनावर पालिएका हुन्छन । आफ्नो जिबिकोपार्जनको लागि गरिएको कृषिलाई उध्योग भन्न मिल्दैन । जब कृषि सामग्री उत्पादन गरेर बजारमा बेचिन्छ र पैसा आर्जन हुन्छ अनी मात्रै त्यसले उध्योगको रुप लिन्छ । आज जिवन निर्बाहको लागि मात्रै कृषि गर्छन् ना कि अर्थ उपार्जनको लागि । अन्य जाती र आजको कृषि कृयाकलापमा तुलना गरियो भने जमिन आसमानको फरक पाईन्छ । एउटै भुभागको एउटै छेत्रफल रहेको बारीमा,उदाहरणकोलागी,आजले ५ मुरी अन्न फलाएका हुन्छन भने अर्को जातले सात मुरी फलाएको हुन्छ । सात मुरी फलाउनेले उन्नत जातको बिउ कँहा पाईन्छ भनी खोज्छ । सरकारी अनुदानको रासायनिक मल खोजेर छर्ला । समयमा सिंचाइ गर्ला । पाँच मुरी फलाउनेलाई यसरी खोज्न अल्छि लाग्ला । कृषि बैज्ञानीकहरुबाट परामर्स लिन लाज लाग्ला । मौसमको ख्याल राख्न नसक्नाले समयमा सिँचाइको ब्याबस्था मिलाउन नसक्ला ।
हो, सफल राजनैतीक आन्दोलन पस्छात कुनै समाज एकैचोटि टुप्पैमा पुग्ला तर तिनका जरा बलियो हुन पर्यो । मैले माथि उठाएका बिषयहरु भनेको जरा बलियो बनाउने दबाइहरु हुन । अग्लो छानो मात्रै भएर भएन गहिरो जग पनि बसाल्न पर्यो । मैले उजगार गर्न खजेको सन्दर्भ चम्किलो गजुरको साथसाथै मजबुत पिलरको पनि हो । राजनैतिक खिचडी सबैले पकाइरहेका छन । लाग्छ, यो बढी पाकेर पनि गली सक्यो । बाँडिचुँडि खान पनि थालियो । तर सामाजिक, सैक्षिक, आर्थिक, साँस्कृतिक जस्ता क्रम:श आटो, ढिंडो, रोटी र तिउन कस्ले पकाउँदैछ ? कती पाकी सक्यो ? कतै काँचै पो छ कि ? कसैले चासो राखेको देखिदैन ।
प्रबासमा नेपाल आदिबासि जनजाति महासंघका दर्जनौ साखा सङ्गठन खोलिएका छन । ति सबै नेपालको राजनैतिक मुद्दामा अल्झेको देख्छु । सबैको स्रोत र साधन राजनैतिक मुद्दामा मात्रै केन्द्रित गरिंदै आर्थिक सहयोग जुटाएर राजनैतिक अभियानलाई मात्रै पठाइन्छ । यस्तो कृयाकलापले चिरस्थाई परिवर्तन ल्यान सक्दैन । राजनैतिक जिम्मा संघिय समाजबादी र जनमुक्ती जस्ता राजनैतीक पार्टिलाई दिएर माथि औंल्याइएका बिषयमा महासंघका साखा कृयासिल हुन आवश्यक छ ।
डाडुपन्यु बोकेका सत्ता पक्षसँग बहिरगर्मन होइन सहकार्य गर्नतिर उन्मुख हुन पर्यो । आजका राजनैतिक गराइ र भनाइले देशमा सामाजिक सदभावना बिथोलिएको आरोप लाग्ने गरेको अवस्थामा 'सर्प पनि मरोस लट्ठी पनि न भाँचियोस' भन्ने भनाइ यस सन्दर्भमा उपयुक्त देखिन्छ ।
Last Updated on Friday, 19 August 2016 03:47
दृष्टिविहीन जीतबहादुर राईबाट प्यूठानका बाढीपहिरो पिडितहरुलाई सहयोग
श्रावण,३२—कहिलेकाहीँ जीवनमा अति अचानक आउने घटनाले मन थाम्न गाह्रो हुन्छ । आज मलाई यस्तै भइरहेको छ र गतिमा कुदेको मनलाई सम्हाल्दै लेख्न बसेको छु । कारण बिहान म फेसबुकमा प्यूठानका बाढीपहिरो पिडितहरुको सहयोग अनि मेरै सिर्जनाका बारेमा करिब २०/२५ जनाको लाइनमा कुरा गर्दै थिएँ ।
एउटा अपरिचितजस्तो लाग्ने जीतबहादुर राई भाइ दाइ नमस्ते भनेर कुरामा जोडिनुभयो । मैले अलि ढिलो गरी उत्तर दिएँ नमस्ते भाइ । भाइको एकछिनमा उत्तर आयो । अगाडि कुरा गरेका म्यासेज हेरेँ भाइलाई मैले एकपटक नमस्ते भाइ भनेको रहेछु । यत्तिमै यति नजिक एकैछिनमा भाइले मेरो नम्बर माग्नुभयो मैले नम्बर दिएँ । भाइको फोन आयो । मैले अलि विस्तारमा सोधेँ । भाइले म दृष्टिविहीन हुँ दाइ भनेपछि म खुब झस्केँ । एकछिन कुरा भयो अनि म यताबाट फोन गर्छु भाइ भनेर फोन काटी फोन डायल गरेर सम्पर्क गरी अलि लामो कुरा गरेँ । मैले भाइ तपाईंलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्ने बेलामा कसरी तपाईंको सहयोग लिनु भन्दा भाइले मेरो मनै जित्ने गरी केही वाक्य भन्नुभयो । भाइले अहिले खाना पकाएर खानु छ दाइ, म एक्लै बस्छु कोठामा, बिहानको १० बजेपछि म गौशाला आइपुग्छु भन्नुभयो । मैले स्वीकारेँ । मेरो मनभरी अनेक कुरा खेले ।
भाइले ठ्याक्कै १०:२० मा फोन गर्नुभयो र भन्नुभयो म गौशाला प्रहरी कार्यालयअगाडि छु । म गौशालातिर लागेँ । पशुपतिमा पूजाआजा भएकाले बाटो एकदमै घुइँचो थियो, हतार हतार पुगेँ म गौशाला । भाइ सेतो छडी टेकेर उभिँदै हुनुहुँदो रहेछ । मैले बोलाएँ र नजिकैको एउटा चिया पसलमा लगेँ । मैले सर्वप्रथम भाइको जन्मघर सोधेँ, धनकुटाको आँखीसल्ला वडा नं ६ मा रहेछ । बाबाको नाम टङ्बहादुर राई र आमाको नाम धनकुमारी राई रहेछ । भाइको जन्म २०४४ साल चैत्र २८ गते भएको रहेछ । २०६४ सालमा प्रथम श्रेणीमा एसएलसी पास गरेर उच्च शिक्षाका लागि काठमाडौँ आउनुभएका जीतबहादुर राईले सोही समयदेखि परिलक्षित नामक संस्थाको थोरै छात्रवृत्तिमा आफ्नो शिक्षा अगाडि बढाउँदै आएर अहिले नेपाली विषयमा स्ताकोत्तर ९एम्ए० दोस्रो वर्षको परीक्षा दिई शोध कार्यमा लाग्नुभएको रहेछ । उहाँ भक्तपुरको सानो ठिमीमा एक्लै बस्नुहुँदो रहेछ । खाना पकाउने, भाँडा माझ्ने, लुगा धुनेलगायतका सबै सबै काम गर्नुहुँदो रहेछ । उहाँका कुरा सुन्दा म अचम्ममा परिरहेको थिएँ । विशेषतस् उहाँमा गीत गाउने शोख रहेछ । धेरै रेडियो एफएमका नियमित स्रोता पनि हुनुहुँदो रहेछ । तपाईंका गीतहरुको म फ्यान हुँ दाइ भन्दै मेरा धेरै गीतहरु कण्ठै सुनाउनुहुँदा म झन् झन् अचम्ममा परेँ । भाइले खाली समयमा अगरबत्ती बेच्नलाई भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौँका धेरै गल्ली गल्लीमा पुगेको कुरा गर्नुभयो । त्यतिबेलै भाइको फोन आयो, म बिजी छु पछि फोन गर्छु भन्नुभयो । मैले जिज्ञासा राखेँ भाइ तपाईंका फोन, सामान र पैसा हराएको छैन रु उत्तर आयो, दाइ एकपटक मोबाइल चोरिदिएको छ कोठाबाटै, त्यतिबेला म पानी भर्दै थिएँ ।
भाइले भन्नुभयो मैले दाइका सबैजस्ता स्टाटसहरु हेर्छु, खुब राम्रा लाग्छन् । कति गम्भीर कुरा जो दृश्टिविहीन हुनुहुन्छ उहाँले मेरा हरेक स्टाटसहरु हेर्नुहुन्छ । जो दृश्टिपूर्ण हुनुहुन्छ प्रायले देख्नुहुन्न । प्यूठानका बाढीपहिरो पिडितहरुका बारेमा मैले राखेका सबैजस्ता स्टाटस पढ्नुभएको रहेछ । कस्तो अचम्म, इच्छा भए केहीले नरोक्ने रहेछ । मैले मेरो कन्फ्युजन राखेँ, भाइ तपाईंले कसरी हेर्नुहुन्छ यसरी रु भाइको उत्तर आयो, दाइ मेरो मोबाइल बोल्छ, म त्यसको सहाराबाट हेर्छु । म अवाक भएँ, नाजवाफ भएँ ।
भाइले यो मेरो प्यूठानका बाढीपहिरो पिडितहरुलाई सहयोग हो भन्दै मतिर पैसा तेर्साउनुभयो । मैले फोटो खिच्न लगाउँछु भन्दै होटलकै भाइलाई बोलाएँ । मैले पैसा कति छ भनेर सोधेँ रु। १५००/- छ दाइ भन्नुभयो तर गन्दा रु। १५५०/- थियो । त्यसमा मैले भाइलाई रु. ४५०र( फिर्ता दिएँ गाडी भाडा भनेर अनि रु. ११००/- राखेँ । मैले प्यूठानमा भाइको नाममा रु. १५००/- नै राखिदिने छु । होटलबाट निस्कने बेलामा भाइले भन्नुभयो मेरी जेठी दिदी पनि दृष्टिविहीन नै हुनुहुन्छ र गाउँमै बस्नुहुन्छ । त्यतिबेला मेरो मन झन् खिन्न भयो । भाइलाई भक्तपुर जाने बस चढाएर म काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा भ्याउनुपर्ने कामतिर लागेँ । आज दिनभरी मनमा भाइकै मात्र कुरा खेलिरह्यो । यत्तिको मन जित्ने मान्छे सायद मैले कमै पाएको छु ।
धन्य जीतबहादुर राई भाइ, जीवनमा मैले तपाईंबाट अति महत्वपूर्ण कुरा सिकेको छु । वास्तवमा कति कुरा सिक्नलाई विश्ववद्यालय जानै पर्दैन । यहाँ धेरैले सोच्नुहोला रकमको कुरा, म ठान्छु जीत भाइको चरित्र, सोचाइ, व्यवहार, सङ्घर्ष दायित्वबोधका कुरा । उहाँले जुन रकम दिनुभएको छ बाढीपहिरो पिडितहरुलाई, सोच्नुस् त मासिक रु. ३०००/- छात्रवृत्ति पाएर, सेतो छडीको सहाराले अगरबत्ती गल्लीगल्ली र पसलहरुमा बेचेर अनि बाँकी खर्च दाइ, बाबासँग जुटाएर कस्तो संघर्ष गर्दै हुनुहुन्छ १ उहाँले कति दिनमा यो रकम जम्मा गर्नुहुन्छ होला रु जीत भाइ, तपाईं स्नातकोत्तर उत्तीर्णपछि क्याम्पस पढाउने अनि गीत सङ्गीतको सेवामा लाग्ने जुन लक्ष्यमा हुनुहुन्छ, तीमध्ये गीत सङ्गीतका काममा मेरो पक्कै सहयोग हुने छ । धरानमा आफ्नै स्वरमा एउटा गीत रेकर्ड गरी बसेका भाइलाई म एउटा गीत रेकर्डमा हरेक पक्षबाट सहयोग गर्ने छु । अरु सहयोग पनि मबाट भइरहने छ भाइलाई ।
मलाई एउटा प्रश्न सोध्न मन लागेको छ, कहीँ भगवान् छन् भने यस्ता राम्रा मान्छेलाई किन यो दुनियाको दृश्यबाट टाढा राखेको होला । यहाँ दिनमा लाख लाख कमाउनेहरु तिनै पिडितको नाममा आएको रकम पचाउन होडबाजी गरिहरेका छन् । धनाड्यहरु कतै ५ रुपैयाँका लागि जस्तै काम गर्न पनि पछि पर्दैनन् । जीतबहादुर राईजस्ता दृष्टिविहीन मायालु मनहरुले आफूले पाएको थोरै छात्रवृत्ति र अगरबत्ती बेचेको पैसा खल्तीमा च्यापेर त्यही पैसाको माध्यबाट समाजसेवा र सहयोगका हात दिँदै हिँड्नुहुन्छ ।
हामी घन्टौँ फेसबुकमा फजुल गफ गर्दै समय व्यतीत गर्छौँ । कहिलेकाहीँ त अनावश्यक नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिकै लागि गनथन गरेका हुन्छौँ । मान्छे आइदिन्छन् भाइ, बहिनी र असल साथी बनेर अनि समस्या देखाउँछन् बाबाआमाको बिरामी र हज्जारौँ रकम ठगेर भाग्छन् । यो विषयबाट म पनि मुक्त छैनँ । मलाई लागेको छ, सहर या जताततै हज्जारौँ खाइदिएर हिँडेकाहरु सामाजिक काममा वेखबर बसिदिन्छन् । हामीले अनावश्यक मोजमस्तीमा हज्जारौँ उडाएका छौँ, फेसबुकमै भेटेका प्रेमका छाडा नकावधारीहरुले हज्जारौँ लुटिदिएका छन् ।
र अन्तयमा भन्न र सोध्न मन लागेको छ, हामी अनावश्यक भनिने सस्ता मनोरञ्जनका फोटा या विषयलाई हज्जारौं लाइक, सयौँ कमेन्ट र दर्जनौ शेयर गरेर प्रोत्साहन गर्छौँ । जीत भाइजस्ता व्यक्तिसँग एक शब्द बोल्नसम्म हिचकिचाउँछौँ । कहीँ कतै केही गरिदिन मान्दैनौँ । धन्य धन्य जीत भाइ, आफ्नो समस्या कहिल्यै नदेखाई एकपटक नमस्ते भाइ मात्र भनेको व्यक्ति किन समाजको समस्यामा यसरी जुट्नुहुन्छ रुरु यो सानो स्टोरी बनाउनुको कारण यहाँहरुले प्यूठानका बाढीपहिरो पिडितहरुलाई अनिवार्य सहयोग गर्नुहोस् भन्ने होइन, सहयोग यहाँहरुको स्वेच्छामा भर पर्छ तर कारण यति हो हामी बाँचेको समाज र हाम्रा व्यवहार।
Last Updated on Tuesday, 16 August 2016 02:15
आदिबासि जनजातिका बारेमा सम्बोधन गरिनुपर्ने अन्य समस्याहरु
आज (आदिबासी जनजाति) का राजनैतीक मात्रै होइनन अन्य मुद्दालाई पनि सम्बोधन गरिनुपर्ने देखिन्छ । आज समुदायमा सामाजिक, सैक्षिक, आर्थिक, साँस्कृतिक र अन्य धेरै पक्षमा समस्याहरु बिद्धमान छन । यि समस्याहरु सर्बप्रथम त आफ्नै कमी कमजोरिका उपलब्धी हुन । राज्यको बिभेदित नितिको प्रतछ्य प्रभाव त छँदै छ । भेदभावपूर्ण नितिलाई औंला ठडाइ-ठडाइ उज्गार गरिन्छ तर आफ्नै कमी-कमजोरिलाई औंल्याईएको भने हुँदैन । तिनका समाधानका उपाय न त कसैले बहस गरेको सुनिन्छ न त निराकरणका कुनै कार्ययोजना बनाइएको छ ।
आजका यि अन्य मुद्दालाई कसैले न उठाएको भने होइन । तिनलाई बोकेर हिंडने केही अभियन्ता जन्मेकै हुन । तर जनसहभागीताको अभावले गर्दा तिनिहरु ओझेल परेका हुन । यसको एक कारण राजनीति गर्नेलाई नेता मान्ने सामाजिक अभियन्तालाई नेता नमान्ने संस्कारले गर्दा हो । सामाजिक समस्याप्रती बोल्ने ब्यक्तिहरुलाई नेता भनिन्न र समाजमा तिनलाई उच्च सम्मान दिइन्न । राजनीति गर्ने नेतालाई मात्रै पुज्ने संस्कारले आजका अन्य इस्यु ओझेलमा परेका हुन । मिडियाले राजनैतिक भाषाण छांट्नेलाई मात्रै फ्रन्ट लाइनमा हेडलाइन बनाइदिन्छ । ति नेतालाई माला र खादा ओडाइन्छ । कुनै भेलामा सम्मानका साथ अगाडिको कुर्चिमा स्थान दिइन्छ । तिनै नेताको फेरी ढाड पछाडि कुरो काटिन्छ । आज (आदिबासी जनजाती) राजनीति बाहेक अन्य आयामतिर उन्मुख नहुनाका केही कारणहरु छन । एउटा त हो, मिडियाले राजनैतिक भाषण छाँटने ब्याक्तिलाई माथि उठाइदिनु अनी समाजमा उसलाई एक हिरोको रुपमा हेरिनु । तर अन्य बिषयका ज्ञाता र अभियन्ताहरुलाई सामान्य ब्यक्तिको रुपमा हेरिन्छ । एउटा पार्टिको झोला बोकेर राजनीति गर्ने ब्यक्ती भोली मन्त्री होला र गाउँमा बाटोघाटो ल्याइदेला भन्ने भ्रमले हो त्यसो गरिएको । राजनैतिक समाधानको रोड म्याप कोरियो । अब तलका मुद्दालाई सम्बोधन गरिने पनि रोड म्याप निर्माण गर्न जरुरी छ ।
आर्थिक उन्नतिलाई आज का संगठनले प्राथमिकताको सुचिमा पिछाडी राखेका छन । संगठनका बिधानमा पहिलो प्राथमिकता भाषा संस्कृतिको सम्रक्षण र सम्बर्धनलाई दिईएको हुन्छ । अब यसलाई परिवर्तन गरी पहिलो उद्देस्य समाजको आर्थिक उन्नती भनेर लेखिन जरुरी छ । आधुनिक युगको अर्थब्यबस्था र यसको महत्व बारे अधिकतम जनसङ्ख्या अनभिज्ञ छन । पैसा धेरै छ भन्दैमा त्यो ब्यक्ती धनी बन्दैन । थोरै पैसाले धेरै बनाउन सक्ने सिप हुनपर्छ । थोरै पुँजिले धेरै उत्पादन गर्न सक्ने कला हुनपर्छ । चुस्त तरिकाले आर्थिक कारोबार चलाऊन सक्नुपर्छ । बलियो अर्थतन्त्र समाजको मियो भने पनि हुन्छ । मावोबाद र मर्क्सबादका भाषाण दिने मात्रै होइन, 'माग र आपुर्ती, क्रेता र बिक्रेता बिचका सम्बन्ध जस्ता अर्थशास्त्रका सिद्दान्तका ज्ञ्याता पनि जन्माउनु पर्ने हुन्छ । सिँह दरबारको कुर्ची मात्रै होइन राष्ट्र बैङ्कको कुर्ची पनि ताक्न जनसक्ती तयार पार्नपर्छ । बस्ति-बस्तीमा मितब्यायिताको जनजागरण कार्यक्रम ल्याउन पर्छ । अगुवा संस्थाहरु आज समुदायमा पुगेर शनिबारे बिहीवारे बजारको स्थापना गरी घरमा उब्जेको साग-सब्जी देखी पालेको भैंसी सुङुर; पारेको जाँडा, तोङ्बा र रक्सी बिक्री गर्न सक्ने माइक्रो इकोनोमीको ब्याबस्था गराइदिनुपर्छ ।
प्रबिधि तथा स्रोत-साधनको प्रयोग- औजार खेलाउन जान्नाले काम छिटो हुन्छ । शरीरलाई आराम हुन्छ । समयको बचत हुन्छ । उब्रेको समयले अर्को काम फत्य गर्न सकिन्छ । जसले छोटो समयमा धेरै काम सिध्याउन सक्छ त्यही समाज बिकास क्रममा अगाडि लम्कने हो । सही औजारको प्रयोगले गरिएको काम राम्रो बलियो पनि हुन्छ । आजमा कस्तो औजार कतिबेला प्रयोग गर्नपर्छ भन्ने कुराको ठीक जानकारी छैन । अनी आफ्नो वरीपरी उपलब्ध स्रोत र साधनलाई समयानुकुल ठीक ठाउँमा प्रयोग भएको हुँदैन । आफैले भारी बोक्ने तर गधा खच्चड प्रयोग नगर्ने बानी हुन्छ । हो, प्रक्रितीको समिप्यले पर्यावरण बचावमा आजको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तर गरिवी र तालिमप्राप्त ज्ञानको अभावले पर्याबरणलाई सखाप पनि परेका हुन्छन । बन्यजन्तु, जडिबुटी र बनस्पतिलाई जोगाउँदै कसरी आफ्नो जिविको पार्जन गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा तिनलाई कसले दिने ? बैज्ञानीक ढंगले कृषि गरेर बाँच्न कसले सिकाउने ? यि बिषयमा ज्ञान दिलाउनु एक जिम्मेवार संस्थाको दायित्व हुन्छ ।
उपसम्हार हो, सफल राजनैतीक आन्दोलन पस्छात कुनै समाज एकैचोटि टुप्पैमा पुग्ला तर तिनका जरा बलियो हुन पर्यो । मैले माथि उठाएका बिषयहरु भनेको जरा बलियो बनाउने दबाइहरु हुन । अग्लो छानो मात्रै भएर भएन गहिरो जग पनि बसाल्न पर्यो । मैले उजगार गर्न खजेको सन्दर्भ चम्किलो गजुरको साथसाथै मजबुत पिलरको पनि हो । राजनैतिक खिचडी सबैले पकाइरहेका छन । लाग्छ, यो बढी पाकेर पनि गली सक्यो । बाँडिचुँडि खान पनि थालियो । तर सामाजिक, सैक्षिक, आर्थिक, साँस्कृतिक जस्ता क्रम:श आटो, ढिंडो, रोटी र तिउन कस्ले पकाउँदैछ ? कती पाकी सक्यो ? कतै काँचै पो छ कि ? कसैले चासो राखेको देखिदैन ।
डाणुपन्यु बोकेका सत्ता पक्षसँग बहिरगर्मन होइन सहकार्य गर्नतिर उन्मुख हुन पर्यो । आजका राजनैतिक गराइ र भनाइले देशमा सामाजिक सदभावना बिथोलिएको आरोप लाग्ने गरेको अवस्थामा 'सर्प पनि मरोस लट्ठी पनि न भाँचियोस' भन्ने भनाइ यस सन्दर्भमा उपयुक्त देखिन्छ ।
(बिजयले बेलायतको बाताबरण बिश्वबिध्यालय बाट बाताबरणमा स्नाकोत्तर गरेका छन भने आदिबासि जनजाति महासंघ बेलायतका सचिब समेत हुन)
Last Updated on Thursday, 18 August 2016 13:57
आर्थिक विकासको नाराः संघीयता र पहिचानको विषयान्तर
बलदीप प्रभाश्वर चामलिङ
रुजवेल्ट र बाबुराम
बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्तिको सन्दर्भमा अमेरिकाको २६ औं राष्ट्रपति थियोडर रुजवेल्ट जुनियरसंगको तुलना उल्लेख्योग्य छ । हुनत भट्टराई भन्दा रुजवेल्ट सिपाही, लेखक, अन्वेषक, प्रकृतिवादी र सुधारक जस्ता बहुआयामिक व्यक्ति थिए । रुजवेल्ट अमेरीकामा सन् १९०१ देखि १९०९ सम्म दुईकार्यकाल राष्ट्रपति बनिसकेको व्यक्ति थिए । पछि तेश्रो कार्यकालको लागि आफ्नो रिपब्लिकन पार्टीको तर्फबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न नसके पछि उनले पार्टी फुटाएर सन् १९१२ मा “प्रोगेसिभ” पार्टी बनाए । यसको विचारधारा नयाँ राष्ट्रवाद र प्रगतिवाद थियो । नयाँ राष्ट्रवाद र प्रगतिशील नाराले सबैको ध्यान ताने । यो नयाँ पार्टी खोलिसकेपछि यसको प्रचारप्रसार तामझामका साथ गरे । धेरै धनाढ्य र वौद्धिक मानिसहरू पनि यस पार्टीमा प्रवेश गरे । उनले यो पार्टीलाई “बुल मुज (साँढे जरायो)” को उपनाम दिइएको थियो किनकि प्रचारप्रसारको क्रममा आफ्नो पार्टीलाई बलियो देखाउन हृष्टपुष्ट साँढेजरायोको उदाहरण दिन्थे । रुजवेल्ट यति ज्याद्रो थिए कि एक पटक प्रचारप्रसारको क्रममा विरोधीले उनीमाथि गोली प्रहार ग¥यो । ५० पेजको उनको भाषणको कापी छेडेर उनको छातीभित्र गोली पुग्यो । उनी प्राणीजीवको शारीरिक संरचनाको विज्ञ पनि भएको कारण मुखबाट खुन ननिस्किन्दासम्म मरिन्न भन्ने उनलाई आत्मविश्वास भएको कारण उनी ढल्नको सट्टा टसमस भएर ९० मिनेट भाषण गरे । अन्तमा उनले दर्शक र शुभचिन्तकहरूलाई भने, “सज्जन वृन्दहरू, मलाई गोली लागेको तपाईहरूलाई थाहा भयो कि होइन । तर त्यस्ता गोलीले साँढे जरायोलाई मार्नसक्दैन ।” उनको ज्याद्रोपन देखेर सबै छक्क परे ।
तर उनको पार्टीको तडकभडक बाबजुत पनि सन् १९१२ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा सोचेभन्दा थोरै मत ल्याए । उनको पार्टीले सोचेजस्तो परिणाम ल्याउन सकेन । राज्यस्तरको निर्वाचनमा पनि उनको पार्टीको हार भयो । यसबाट जनतामात्र होइन, सो पार्टीका कार्यकर्ता र नेताहरूमा नैराश्यता आयो । पछि सबै नेताकार्यकर्ता माउ पार्टी रिपब्लिकन पार्टीमै फर्कन थाले । अन्तमा रुजवेल्ट पनि पहिलेकै पार्टीमा आए । सन् १९१८ सम्म आइनपुग्दै यो पार्टी पूर्णरूपमा विघटन नै हुनपुग्यो । यसरी स्थापना भएको ६ वर्ष सम्म मात्र यो नयाँ पार्टी टिक्न सफल भयो ।
हो, इतिहास त नदोहोरिएला । संयोग नै मान्नुपर्ला कि माओवादी पार्टीलाई एक्कासी त्यागेर भट्टराईले नयाँ पार्टी खोलेका छन्, उही थियोडर रुजवेल्टको शैलीमा । रुजवेल्टको नियती बाबुरामले भोग्नै पर्छ भन्ने त छैन । तर बाटो सरल छैन । पार्टी खोल्नु ठूलो कुरा होइन, त्यसलाई धान्न चार्हि महत्वपूर्ण हो ।
भट्टराईको अतिरिक्त महत्वाकांक्षा
राहुल साँस्कृत्यायनले भनेका छन, “दुनियाँदेखि भाग्ने होइन, त्यसलाई बदल्ने हो ।” बाबुरामले माउ पार्टीमा जुन खोट देखाएर त्यहाँबाट टाढिए, यसबाट माउ पार्टीमा रहेको त्यो खोटले उन्मुक्ती पाउने भए । माउ पार्टीमा गम्भीर त्रुटी भए त्यसलाई समाधान नगरी भाग्ने हो भने त्यो त्रुटीको पक्षपोषकहरू त माउ पार्टीमा रहने नै भो । उनीहरूले त्यसलाई संस्थागत गर्ने नै भो । भोली त्यही शक्ति बाबुरामको प्रतिद्वन्दीको रूपमा रहिनै रहने भो ।
यद्यपि भट्टरार्ईले त्यो आरोपले नयाँ पार्टी खोल्नुको औचित्य प्रदान गर्न खोजेका हुन् । वास्तवमा उनमा महत्वकांक्षी लहड चलेको हो । मानिसले अन्तिम उपलब्धी हासिल गरिसकेपछि उ लापारवाही हुन्छ । उसले बाँकी जीवन जुवाको दाउमा राख्छ । यो मानवीय मनोविज्ञान हो । भट्टराईको मानसिकता भनेको “आए आँप गए झटारो” हो । बन्नुपर्ने मुलुकको प्रधानमन्त्री चाँडो उमेरमै बनेकै हो । भूपू प्रधानमन्त्रीको नाताले राज्यले मानसम्मान, सुरक्षा र भत्ता दिने नै छन् । सिंहदरवारमा फोटो टाँसेर इतिहास बनेकै छन् । अब उप्रान्त बाँकी उमेरमा प्रचण्डसंग कचकच गरेर रहनुभन्दा अर्कै राजनीतिक माहोल बनाएर जनताको वाहवाहीको पात्र बन्ने उनको अतिरिक्त महत्वाकाक्षा हो । लागे लाग मोहनी नत्र घरमै छ भने झै यो पथबाट भोली स्खलित हुनपरेता पनि अगाडि नै प्राप्त उपलब्धीले उनको उचाई नघट्ने उनको आत्मानुभूति हो । आम जनताले आफूलाई विद्वान र स्वच्छ राजनीतिक छवी भएको नेताको रूपमा ग्रहण गरेका छन् भन्ने उनको स्वःठम्याइलाई पनि उनले भजाउन खोजेका हुन् ।
विभिन्न झुण्डहरूको स्वार्थ केन्द्रः नयाँशक्ति
नयाँ शक्तिको विचार भने पनि सिद्धान्त भने पनि बाबुराम भट्टराई व्यक्ति हो । व्यक्ति हेरेर नै मान्छे त्यहाँ गएका हुन् । बाबुरामको व्यक्तित्व भनेको हिजोका प्रधानमन्त्री हुन् । उनको व्यक्तित्वको अर्को आयाम भनेको विद्यालय तहदेखि उत्कृष्ट हुदै विद्यावारिधि हो । लाटो समाजमा यहाँ भन्दाअरू आकार्षणको कुरा नै हुनसक्दैन । प्राज्ञिक योग्यताले हाइन, राजनीतिक सहकारीताले मात्र देश बन्छ भन्ने कुरा यो समाजले अझै बुझ्न भ्याएका छैनन् ।
नयाँ शक्ति थरिथरि स्वार्थभएकाहरूको मञ्च हो । यहाँ तीन किसिमका मान्छेहरू छन् ।
पहिलो, हिजोका आआफ्ना पार्टीमा आफ्नो राजनीतिक वृतविकासको भविष्य नदेखेर नयाँ शक्तिमा लाग्नेहरू छन् । जस्तै माओवादीमै रहेर काम गर्दा उनीहरूको राजनीतिक महत्वाकांक्षा पुरा हुने सम्भावना नदेखेका नेताहरूले नै बाबुरामलाई साथ दिएका छन् । आर्थिक विकासको नाराको आडमा मुलुकमा नयाँ तरंग ल्याएर राजनीतिमा स्थापित हुन सकिन्छ कि भन्ने दाउ हो, उनीहरूको । विभन्न पार्टीमा पदीय लाभ कुर्दाकुर्दा हैरान भएकाहरू नयाँ शक्तिमा उदयीमान नेता हुन सकिन्छ कि भनेर लाग्नेहरू हुन उनीहरू ।
दोश्रो तहका मान्छेहरू चाहिँ राजनीतिक पदीय लाभ भन्दा पनि व्यक्तिगत लाभको आशामा छन् । विशेषगरी पढेका तर जागीर नपाएका युवा जमात यसमा पर्छन । नयाँ शक्ति पार्टीले चाँडै उचाइ लिन सक्यो भने त्यसबाट केही लाभ लिन सकिन्छ भन्नेहरू छन् । बाबुरामकहाँ गइयो भने भारतको विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गर्न सजिलो हुन्छ भनेर मेरै एउटा साथी त्यहाँ गएका छन् ।
तेश्रो तहका मान्छेहरूचाहिँ निर्दोष पाराले लागेका छन् । ठूला पार्टीहरूले केही गर्न नसकिरहेको अवस्थामा बाबुरामको पार्टीले देशमा सुख र समृद्धि ल्याउला भन्ने आश उनीहरूमा छ । उनीहरूमा पदीय लाभ र अवसरको लोभ छैन् । देश कसरी समृद्ध हुन्छ भन्नेहरू हुन् उनीहरू ।
आर्थिक विकासको नाराः पहिचान र संघीयताको विषयान्तर
आर्थिक विकासको आधार भनेको स्थायीशान्ति हो । स्थायीशान्ति त जनताको राजनीतिक मुद्दा हल भएपछि कायम हुने हो । पुँजी र प्रविधिको लागानी र परिचालन स्थायीशान्तिकालमै हुने हो । यो अवस्था भनेको आर्थिक विकासको गतिविधि हो । तोडफोड, हत्याहिंसा, आतंक र असहयोगको आन्दोलनको परिवेशमा विकास निर्माणको काम गर्न सकिन्न । त्यस्तो परिस्थितिको पहिले राजनीतिक हल खोज्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपामा आर्थिक विकासको आधार तयार तयार भएकै छैन । यहाँका जनताहरूले अझै पहिचान र अधिकार खोजिरहेको अवस्था छ । जनताहरू चेतनाले नागरिकीकरणको प्रकृयामा छन् । नागरिकहरूलाई राजनीतिक अधिकार बाहेक अन्य कुरा तपशीलका हुन् । सबै परिवर्तन विकास हुन सक्दैन र सबै विकास जनताको आकांक्षा पनि हुनसक्दैन । राजनीतिसंग जोडिएको जनताको मुद्दालाई हल नगरी आर्थिक विकासको कुरा गर्नु हावादारी विषय हो । वास्तवमा बाबुरामको आर्थिक विकासको कुरा भनेको संघीयता र पहिचानको मुद्दाको विषयान्तर हो । यस मुद्दाबाट जनताको ध्यानलाई अन्तै मोड्नु हो ।
भट्टराईको दोहोरो मापदण्ड देखियो । यसैले उनीप्रतिको विश्वासमा संकट पैदाभो । राजनीतिमा जे बाहिर देखिन्छ त्यो भित्र हुन्न । भट्टराईको कदम बक्रगामी देखियो । जारी संविधानप्रति नै उनको आत्मिय झुकाव र समर्थन हो भन्ने कुरा संविधानसभामा यो संविधान जारी गर्दा ताका उनको भूमिकाले प्रस्ट पार्दछ । यो संविधान जारी गराउन उनको हस्ताक्षर छ । यो संविधान यो कारणले वेठीक छ भनेर उनले नोट अव डिसेन्ट अभिव्यक्ति दिन सकेन । संविधान जारी गराउने कुरामा भित्र सही ठोक्ने अनि बाहिर आएर असन्तुष्ट पक्षको आन्दोलनमा गएर त्यही संविधान ठीक भएन भनेर भाषण गर्ने कुराले नै उनी माथि प्रश्न ठडिए ।
गाईलाई राष्ट्रिय जनावर बनाउने र धर्मनिरपेक्षतालाई सनातनधर्मसंग जोडेर नेपाललाई फेरि उही हिन्दुराज्य नै बनाउने यो छद्म संविधानको जारीकर्ता भट्टराई एकल हिन्दुनश्लीय सर्वोच्चताको पक्षपाती होइन भन्ने आधार के ?
संविधान जारी गरिसकेपछि त्यसलाई पुनरलेखन गराउन प्रायः असम्भव हुन्छ, सानातिनो आन्दोलनले त्यसलाई प्रभाव पार्न सक्दैन, यसो भएपछि यही संविधान नै रहिरहन्छ, यो संविधान रहुन्जेल् जनजाति र मधेशीमा असन्तुष्ट रहिरहन्छ र त्यही असन्तुष्टीलाई “क्यास डाउन” गरेर नयाँ शक्ति निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने सोचकै परिणाम हो, उनको यो राजनीतिक यात्रा ।
ब्याक फायरः मधेसी र जनजातिमाथिको निर्भरता
असन्तुष्टी मधेसी र जनजातिमा छन् र तिनीहरूलाई जनाधार बनाएर लग्न सकिन्छ भन्ने उनको नीति हो । पार्टीमा जातीय क्लष्टरको अवधारणा छ । वास्तवमा बाहुनछेत्री बाबुरामको पार्टीको जनाधार बन्न सक्ने अवस्था छैन । उनको पार्टीमा लागिदिने भनेको उही जनजाति र मधेसी हुन् । तर यी जातीय समुदायबाट पनि उनले साथ पाउला जस्तो छैन । अझै मधेसीहरू उनको पार्टीप्रति कुनै अभिरूची देखाएका छैनन् । उता जनजातिमा पनि विनाजनाधारका परशुराम तामाङहरूजस्ता छवि धमिलिएकाहरू मात्र छन् । आइएनजियो एनजिओको लाभले बानी विग्रिएकाहरू छन् ।
यसबाट के देखिन्छ भने पार्टीमा संकलित रकम भइन्जेल् उर्जा र आकर्षण हुने हो । यसको अर्थ यो होइन कि बाबुरामको पार्टी शुुुुन्य नै हुन्छ । केही जनाधार हन्छ, उसको । दुइचार ठाउँ जित्न पनि सक्छ । तर वैकल्पिक शक्ति नै भएर तुरन्तै आइहाल्ने कुराचाहिँ ठट्टाको विषय हो ।
पार्टीको दीर्घकालिन जीवनप्रति आशंका
यो पार्टी बाबुराम भट्टराईको जीवनकाल भरी मात्र रहने हो किनकि मानिसहरू उनलाई नै हेरेर लागेका हुन् । भट्टराइको जीवन कथङ्कदाचित तलमाथि भए पार्टीको जीवनमा सङकट आइपर्नेछ । त्यसपछि त्यहाँ कसैले एकले अर्कोलाई मान्नेवाला छैनन् । त्यो उचाइको नेता पनि हुने छैनन् ।
हिजो युद्धकालमा संगैमर्ने र संगैबाच्ने प्रण गर्ने सहयात्रीहरूलाई त चटक्कै छाडेर अन्य बाटो तिर लाग्ने मानिसले त्यस्तै नयाँ पार्टीमा संकट आयो भने अभागी झुण्डहरूलाई नै कुरी बस्लान् त, भट्टराई जीले ? त्यस्तै आइपरे रुजवेल्टजस्तै माउपार्टीमा फर्कन सक्दैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?
बाबुराम भट्टराई अहिले आफ्नो पार्टीको औचित्य पुष्टी गर्न आफ्नै माउपार्टीविरूद्ध खनिएको देखिन्छ । काग्रेस र एमालेले आफूहरू धोइपखालिन प्रचण्ड माओवादीलाई वासिङ पाउडरको रूपमा प्रयोग गरिरहेको भनेर भट्टराईले चार्ज लगाउन थालेका छन् । कहिले कांग्रेस र कहिले एमालेले माओवादी केन्द्रलाई वासिङ पाउडरको रूपमा प्रयोग गरिरहेको भट्टराईले भनिरहदा उनी स्वयम आफूचाहिँ के हुन त ?
कुनै पूर्वाग्रह नराखी वस्तुपरक ढंगमा यसो भन्दा कसैले आपती मान्नुपर्ने आवश्यकता छैन कि बाबुराम भट्टराई उसिनेको अण्डा हुन् जस्ले चल्ला उत्पादन गर्न सक्दैन । माउपार्टीमा रहदाँ नै भट्टराईको “पोलिटिकल भर्जिनिटी” भंग भैसकेको हो । उनको उर्वरदक्षता कति हो भन्ने कुरा त्यही बेला परिक्षण भैसकेको हो । अबको उनको कदमले अधिकार र पहिचानको आन्दोलनलाई “डिस्टर्व” बाहेक अरू केही गर्दैन ।
Last Updated on Saturday, 06 August 2016 02:15
नेपाली सेनाको ठूलो रहस्य पर्दाफास, कटवालदेखि क्षत्रीसम्मको मनपरी
के पी ओली गएकै जाति
को–को थिए लखन थापासँगै मारिनेहरू
सत्ता टिकाउने र ढाल्नेहरुको उद्देश्य
मिग मिडिया प्रा.ली द्धारा संचालित
सुचना तथा प्रसारण बिभाग
दर्ता नम्बर १६८७/०७६-७७
ललितपुर १४, ललितपुर
हुम बहादुर थापा मगर
Rajyasatta.com © 2010-2020. All rights reserved.